Okuhle kakhulu nge-Cyber ​​Monday kusebenza kubuchwepheshe | Izindaba zamagajethi
ICyber ​​Monday singayibiza, kepha masivume, kungcono ukuyibiza NgoMsombuluko weCyber. Isiko leBlack Friday lisabalele, futhi ama-brand acabanga ukuthi uMsombuluko obandayo ngemuva kwalezi zindleko kungaba usuku oluhle lokuqhubeka nokusebenzisa imali eningi kakhulu uma kungenzeka, ngakho-ke, uCyber ​​Monday wazalwa ngo-2005.
Njengenjwayelo, ku-Actualidad Gadget qSifuna ukukulethela okungcono kakhulu okuhlinzekwa yi-Cyber ​​Monday ozokonga ngakho kakhulu kule mikhiqizo yobuchwepheshe ethokozisayo ezokwenza impilo yakho ibe lula. Ungabaphuthelwa, thola nathi imikhiqizo ehamba phambili futhi ngamanani aphansi ngalo Msombuluko we-Cyber ​​ofika ngoMsombuluko, Novemba 30.
1 I-Amazon Echo ne-Amazon Fire
2 Izinto ezigqokekayo nezipholile
3 Izesekeli ze-PC nezokudlala
4 Ukunikezwa okuhlukahlukene ngalo Msombuluko we-Cyber
I-Amazon Echo ne-Amazon Fire
Uchungechunge lwemikhiqizo yakwa-Amazon ye-Echo ne-Fire lithole lokho engicabanga ngobuqotho ukuthi izaphulelo ezithakazelisa kakhulu futhi ezinolaka phakathi nalo Lwesihlanu Olumnyama futhi bezingeke zibe ngaphansi ngesikhathi NgoMsombuluko we-Cyber, Futhi ukuthi zonke izaphulelo esizokukhombisa zona lapha zizotholakala ngoMsombuluko, Novemba 30 zifakiwe, ngeke zibe ngaphansi:
Siqala ngesizukulwane sesine i-Amazon Echo Dot, zombili ngewashi nangaphandle kwewashi, ziyaqhubeka zibize isuka kuma-euro angu-69,99 iya kuma-euro angu-39,99 esimweni sokuqala, futhi isuka kuma-euro angu-59,99 iya kuma-euro angu-29,99 kwesibili. izibeka njengomnikelo omuhle maqondana nalokhu.
Asikwazi ukungayinaki i-Amazon Echo yendabuko, mhlawumbe isipho esivelele kunazo zonke esinakho phambi kweCyber ​​Monda. Ukunikezwa kuleli cala ukuthi kusuka ekubizeni i-99,99 euro yenani elijwayelekile kuye kuma-euro angama-69,99 okunikezwayo.
Ngeke sishiye uhla loMlilo, olwenzelwe ezokuzijabulisa nokuthi siba nesikhathi esimnandi nochungechunge lwethu oluthandayo nama-movie, singajabulela i-YouTube nesiteshi sethu. Le Cube ye-Amazon Fire TV Ibone ukwehla kwentengo yayo isuka kuma-euro angama-119,99 ebiza ukwethulwa kuya kuma-euro angama-79,99 ebiza manje, intengo ethokozisayo kakhulu uma sibheka ukuthi iyakwazi ukudlala okuqukethwe kweDolby Vision HDR10 kusinqumo se-4K
Izinto ezigqokekayo nezipholile
Siqala ngamahedfoni, sikulethela ama-headphone amancane ahlangabezana nezidingo zama-B amathathu, okungukuthi: Ahle, mahle futhi ashibhile.
Ama-headphone we-TWS AUKEY: Bane-Bluetooth 5.0, bazimele ngokuphelele omunye komunye futhi banezilinganiso ezingaphezu kwezingu-20.000 39,99 ezikhawulela ekupheleleni, eziwela zisuka kuma-euro angu-19,99 ziye kuma-euro angu-XNUMX kuphela> XHUMANA NOKUTHENGA.
IHuawei Watch GT Sport: Sizokutshela ini ngaleli washi ongalazi, unyaka nonyaka lilwela ukuthengiswa kakhulu kulabo abahambisana ne-Android, futhi akukhona ukubonga okuncane ngenxa yokuthi ineTruSleep, GPS kanye ukuqapha kokushaya kwenhliziyo kwe-69,00 kuphela, isaphulelo esibaluleke kakhulu> XHUMANA NOKUTHENGA.
I-Samsung Galaxy Tab A: Sithola ithebhulethi yebanga lokufinyelela ene-2GB ye-RAM ne-32GB yokugcina esikrinini esingu-10,1-intshi ngaphansi kwama-euro angama-180> XHUMANA NOKUTHENGA.
Izesekeli ze-PC nezokudlala
Manje ake siye kuzesekeli ze-PC, ngoba abasebenzisi be-PC yibo abafuna kakhulu ngalolu hlobo lomkhiqizo futhi-ke basebenzisa amadili amahle kakhulu we-Cyber ​​Monday, ungaphuthelwa neyodwa:
ILogitech G502 SE iqhawe: Sibhekene negundane lokudlala kusuka kumkhiqizo ophezulu njengeLogitech. Sinamagundane asezingeni eliphezulu anezinkinobho eziyi-11 ezingahleleka, i-RGB kanye nezibuyekezo ezingaphezulu kwe-17.500 ezinhle kakhulu ezithola isaphulelo esingu-56% ku-Amazon futhi sikhuphukele kuma-euro angama-39,90, ukuthengiselana kwangempela> XHUMANA NOKUTHENGA.
ILogitech G29: Uma ufuna ukushayela cishe okwangempela kufanele ubuyele kuLogitech, ikunikeza isondo lokushayela lemodeli le-G29 nama-pedals ane-Force Feedback, enziwe nge-aluminium anodized, nama-shift paddles afakiwe nokunye okuningi okuhambisana ngokuphelele ne-PC, Mac ngisho I-PlayStation yama-euro angama-269 kuphela> XHUMANA NOKUTHENGA.
Ihedsethi yokudlala yeHyper X: Lawa ma-headphone yimodeli ye-HX-HSCF-BK futhi angikwazi ukukutshela okuncane ngeHyper X ongayazi. Hhayi nje ukuthi ahambisana ne-PC kepha ungawasebenzisa naku-PS $ yakho futhi intengo yawo yehlela kuma-euro ayi-129,00> XHUMANA NOKUTHENGA.
Ukunikezwa okuhlukahlukene ngalo Msombuluko we-Cyber
Manje sizokwenza imikhiqizo eminingi enconyiwe yazo zonke izinhlobo ukuze ungalahlekelwa iso lakho ngesikhathi se-Cyber ​​Monday:
URoomba 692: Imodeli ye-IRobot, iRoomba yasekuqaleni enokuxhumeka kwe-WiFi, enconyelwa ikakhulukazi okhaphethi, ithola isaphulelo esingu-55% futhi ihlala KUPHELA KU-179,00 euros> XHUMANA NOKUTHENGA.
I-X3 NFC encane: Iselula ene-6GB ye-RAM, ukulungiswa kwe-FHD + neprosesa ye-Snapdragon 732G ephelezelwa yi-128 GB yesitoreji. Singasho okuncane ngentengo yekhwalithi kaPoco, ihlala kuma-euro angama-229,00, ngaphezulu kwama-euro angamashumi amane off> XHUMANA NOKUTHENGA.
I-Samsung 43YU8005: I-Crystal UHD TV evela ku-Samsung enesinqumo esingu-4K, i-HDR10 + nokusebenza okuhle kwe-Smart TV yakho ngama-euro angama-375 kuphela ngamasentimitha angama-43> XHUMANA NOKUTHENGA.
Lezi kube yizivumelwano zethu ezinhle kakhulu ze-Cyber ​​Monday, ungazilahli.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amadili amahle kakhulu we-Cyber ​​Monday